Flim2MM: June 2017
1998 ရဲ့ကားကောင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တဲ့ မင်းသားတွေ ဖြစ်တဲ့ Tommy Lee Jones (MIB) ၊ Wesley Snipes (Blade) နဲ့ Robert Downey Jr. (Iron Man) တို့ ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာတဲ့ Action, Crime, Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားပါ။
ဒီကားကို ၁၉၉၃ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ The Fugitive ဇာတ်ကားရဲ့ ဒုတိယတွဲလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
ဝရမ်းပြေးတစ်ယောက်ကို လိုက်ဖမ်းရင်း မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အန္တရာယ်ကို ကြုံတွေ့ရတဲ့ ရဲအရာရှိ အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။
[FORMAT]:………………………….:) BluRay / 640p SD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Crime, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1.3 GB / 508 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1280x720/ 640x436
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 11 mins
[Translate By]:……………………..:) Sithu Htet
openload SD Small
Posted by Y Junction at 1:13:00 PM No comments:
ဆက်လက်ပြီးတော့ SAW IV ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လူငယ်ဒါရိုက်တာ James Wan ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြောက်လန့်စေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော်များများဟာ သူနဲ့ Leigh Wannell တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေပါလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တွေ သူတို့ဇာတ်ကောင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ ပိုမိုနစ်မျောပြီး အသက်ဝင်စေဖို့အတွက် ရေချိုးခန်းအတွင်းက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဇာတ်လမ်းအလိုက် အစဉ်အတိုင်းရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Horror, Mystery
[FILE SIZE]:…………………….….:) 770 MB / 327 MB
[Translate By]:……………………..:) Wai Linn Kyaw
Posted by Y Junction at 8:46:00 AM No comments:
Labels: Hollywood, Horror, Mystery
တခါတခါ မှော်ပညာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အချစ်တွေဟာ သာမာန်အချစ်တွေထက် ပိုပြီးသာယာစေပါတယ်။ လူတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုစားတတ်တဲ့ စုန်းမတယောက်ဟာ တခြားသူရဲ့ လင်ယောက်ျားကို ကြိုက်မိတဲ့အခါ.... ယောက်ျားဆိုတာကလည်း သိတယ်မဟုတ်လား..
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စုန်းမအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Xun Zhou ရဲ့ အလှအပကို အဓိကအသားပေး ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ IP မင်းသားကြီး Donnie Yen အားဖြည့်ပါဝင်ထားတဲ့ 2008 ခုနှစ်ထွက် အချစ်အက်ရှင် မှော်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်သူညီငယ်မှလည်း နာမည်မဖေါ်ပြလိုတဲ့ အတွက် Anonymous လို့ရေးပေးထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးကြပါဦး။
သင်တို့ ကွာလတီကောင်းပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရဖို့အတွက်တော့ encoder ကြီး Nyi Htut (အလွမ်းသံစဉ်)မှ တာဝန်ယူ ကုတ်ပေးနေပါတယ် :P
[FILE SIZE]:…………………….….:) 866 MB / 426 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 43 mins
[Translate By]:……………………..:) Anonymous
Posted by Y Junction at 9:49:00 AM 1 comment:
Labels: Action, China, Drama, Fantasy
Saw မင်းသား Jigsaw ရဲ့ နောက်ထပ်ရက်ရက်စက်စက် အကွက်တွေကို မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ကြည့်ဖို့ အပိုင်း ၃ ကို ထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဂျစ်ဆောလို့ ခေါ်တဲ့ ဂျွန် ခရမ်မာက ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ။ ဂျစ်ဆောမှာ ဖလော်ဆော်ဖီ တစ်ခု ရှိတယ် ။ သူ့ ဖလော်ဆော်ဖီကတော့ " ကိုယ့် ဘဝကို တန်ဖိုး မထားသူဟာ အသက်ရှင်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူး" တဲ့ ။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 768 MB / 362 MB
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက တိတ်ခွေနဲ့ ခေါက်တုံခေါက်ပြန် ကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ အံစာတုံးသရဲခေါ် Jumanji ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အံစာတုံးလေးခေါက်လိုက်ရာကနေ သူညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း ပြင်ပလောကမှာပါ ပုံစံတူလိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်ကားကောင်းကို ကြည့်ဖူသူတိုင်း နှစ်သက်ကြမှာပါ။
အာဖရိက ဗုံသံတွေနဲ့ မှော်ဝင်နေတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခု Jumanji လို့ ခေါ်တယ် ။ ဂျူမန်ဂျီ ဒီကစားနည်းဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာကို ချန်ပြီး ကမ္ဘာသစ်ကို ရှာသူများအတွက် ကစားနည်း တစ်ခုပေါ့ ။ အံစာတုံးကို လှိမ့်ပြီး ကျလာတဲ့ နံပါတ်အတိုင်း အရုပ်တွေကို လျှောက်လမ်းအတိုင်း ရွှေ့ရမယ် အဆုံးကို အရင် ရောက်သူက နိုင်တယ် ။
ကဲ ခင်ဗျားရော ကစားချင်သလား ....
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ကွန်လွယ်သွားရှာဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်မင်းသားကြီး ရော်ဘီဝီလီယျံက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ယခု 2017 မှာတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဆက်ကိုရိုက်ကူးရာမှာတော့ နာမည်ကျော် နပန်းမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ The Rock ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် The Rock က သူနဲ့အတူ နာမည်ကြီးဟာသ သရုပ်ဆောင် ဂျက်ဘလက်ပါ ပါဝင်လာဦးမှာပါ။
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Family
[FILE SIZE]:…………………….….:) 765 MB / 361 MB
Posted by Y Junction at 4:10:00 AM No comments:
SAW2ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စုံထာက်အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ စက်ရုံထဲမှာပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ လူ ၈ ဦးကို ကယ်တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်လှောင်ထားတဲ့သူကတော့ Jigsaw လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းစားလူသတ်သမားပဲဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်သူက တော့ Wai Lin Kyaw ဖြစ်ပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 694 MB / 319 MB
Posted by Y Junction at 8:00:00 AM No comments:
သူ့ကို ရဲတွေနဲ့ သတင်းစာတွေက Jigsaw လို့ ခေါ်တယ် ။
ဂျစ်ဆော ဆိုတာ ဥာဏ်စမ်း ရုပ်ဆက် ကစားနည်း တစ်ခု ။ ဂျွန် ခရမ်မာ ဟာ သူ့သားကောင်တွေကို သတ်ပြီးရင် ဂျစ်ဆောလို့ ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်စမ်း ရုပ်ဆက် ကစားနည်းလို သေသူ ရဲ့ အရေပြား အပိုင်းအစလေးတွေကို ခွာယူလေ့ရှိတယ် ။
ဂျွန် ခရမ်မာက ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ။ ဂျစ်ဆောမှာ ဖလော်ဆော်ဖီ တစ်ခု ရှိတယ် ။ သူ့ ဖလော်ဆော်ဖီကတော့ " ကိုယ့် ဘဝကို တန်ဖိုး မထားသူဟာ အသက်ရှင်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူး" တဲ့ ။
မိမိဘဝ အသက်ရှင်သန်ဖို့ အတွက် မိမိကိုယ်ခန္ဓာက ဘာတွေကို ဘယ်လောက် အဆုံးရှုံးခံနိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်တာ ။ လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဆိုး ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ယုတ်မာမာ နောက်ဆုံး မိမိ အသက်ကိုတော့ နှမြောတတ်တာပဲ ။ လူတွေဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်းလဲ သွားတတ်တယ် ။
သိပ်ကောင်းပေမယ့် သွေသံရဲရဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြောင့် အညွှန်းကို ဒီထက် ချဲ့ကားရေးပြလို့ မဖြစ်တော့ဘူး ။ အဲဒိတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ယူတတ်ရင် ဆက်ကြည့်ပေတော့ ....
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ လူသတ်မှုတွေ နဲ့ အစမှ အဆုံးထိတိုင် ပြည့်နေလို့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဇာတ်ကားလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပေမယ့် ဂျစ်ဆောရဲ့ ဒဿနတွေကို ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်ခဲ့ရင် ကျုပ် ဘာသာပြန်ပေးရတာ အချိန်ကုန်ရကျိုး ပင်ပန်းရကျိုး တန်ပါတယ်ဗျာလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 663 MB / 312 MB
Posted by Y Junction at 8:08:00 AM No comments:
ဂျပန်တွေ လက်နက်ချပြီး တစ်နှစ်အကြာ တရုတ်ပြည် အရှေ့မြောက် အပိုင်းမှာ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေ ဖြစ်လာတယ် ။ စစ်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်း နေရာအနှံ့မှာ တောပုန်းဓားပြတွေ သောင်းကျန်းလာတယ် ။ သူတို့က လူသတ် ပစ္စည်းလုပြီး အင်အား တောင့်တင်းလာတော့ နယ်မြေချဲ့ထွင်လာတယ် ။
ဂျပန်တွေ တရုတ်ပြည်ကို စတင်တိုက်ခိုက်တော့
မြောက်ပိုင်း စစ်ဘုရင် ဇောင်းဟာ တောင်တွေထဲမှာဂျပန်တွေ မသိအောင် တရုတ် စစ်သည်တွေကို ကြိုတင် ဝှက်ထားခဲ့တယ် ။ ဂျပန်ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို အချည်းနှီးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဂျပန်တပ်တွေ ဆုတ်သွားတော့ တောင်ထဲက တရုတ်စစ်သည်တွေက သူတို့ဘာသာ နည်းလမ်းရှာပြီး ထွက်သွားကုန်ကြတယ် ။
မြောက်ပိုင်း စစ်ဘုရင် ဇောင်း ရှိစဉ်က မြေပုံသုံးခု ဆွဲခဲ့တယ် ။
ပထမဆုံးမြေပုံက တည်နေရာပြ မြေပုံ ။
တောင် ၉ လုံး ၊ တောင်ပို့ ၁၈ လုံး ၊ ဂိုဏ်း ၁၃ ဂိုဏ်း ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာတွေ ပါဝင်တယ် ။
ဒုတိယမြေပုံက လက်နက်ခဲယမ်းတိုက် မြေပုံ ။
မြောက်ပိုင်း စစ်ဘုရင် ဇောင်းဟာ တောတောင်တွေထဲမှာ လက်နက်ခဲယမ်းတိုက်တွေ တည်ဆောက်ခဲ့တယ် ။ သေနတ် တစ်သောင်းကျော် အမြှောက် တစ်ရာကျော် သိမ်းထားခဲ့တယ် ။ အဲဒိ လက်နက်တိုက် နှစ်ခု ထဲက တစ်ခုက ကျားတောင်မှာ ရှိတယ် ။
စစ်ဘုရင် ဇောင်းရဲ့ ရတနာ မြေပုံပဲ ရွှေချည့် တန် ၄၀ ရှိတယ် ။
အဲဒိမြေပုံ သုံးခုလုံး ရရှိသူဟာ မြောက်ပိုင်း တစ်ခွင်မှာ ဘုရင်ပဲ ။
အဲဒိ မြေပုံ သုံးခုကို ဂိုဏ်းတွေ အကြား ဘယ်လို လုမလဲ ?
မော်စီတုံး ရဲ့ တပ်မတော် PLA ကရော မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင် ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ ?
ချန်ကေရှိတ် ရဲ့ KMT တပ်ကရော ဘာတွေကို ဘယ်လို ခြေထိုးခံမလဲ ?
ကွန်မြူနစ်ရယ် ဆိုရှယ်လစ်ရယ် တောပုန်းဓားပြတွေ ကြားက ဩဇာအာဏာ လုပွဲကြီး ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Wai Lin Kyaw
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1 GB / 627 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1224x688/ 640x268
[Translate By]:……………………..:) Wai Lin Kyaw
Posted by Y Junction at 7:41:00 AM 1 comment:
Labels: Action, Adventure, Biography, China
အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြမ်းကြမ်းတကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2016 ထွက် တရုတ်အက်ရှင်ကားပေါ့။ ဘာသာပြန်သူကတော့
[FORMAT]:………………………….:) 720p BluRay / 640p SD
[GENRE]:……………………….… .:) Thriller, Action
[FILE SIZE]:…………………….….:) 862 MB / 376 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1280x544 / 640x268
[Translate By]:……………………..:) Aung Myint Oo
Posted by Y Junction at 10:58:00 AM 1 comment:
Labels: Action, China, Thriller
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် တို့ဟာ စစ်ပွဲများစွာ အကြိမ်ကြိမ်နွှဲခဲ့ရပြီး လူပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်တွေလဲ စတေးခဲ့ရပါတယ် ။ မြေပြင် ဝေဟင် စစ်ပွဲတွေကိုတော့ လူသိများခဲ့ကြပေမယ့် ရေပြင် အဏ္ဏဝါ စစ်ပွဲတွေကိုတော့ လူသိနည်းခဲ့ပါတယ် ။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာလဲ ပါကစ္စတန်ဟာ တစ်ချိန်က အရှေ့ပါကစ္စတန်လို့ အမည်တွင်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ တော်လှန်မှုတွေ ပြန်လည် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ် ။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ပါကစ္စတပ်တွေအတွက် အထောက်အပံ့များစွာ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒီလိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုရင် အိန္ဒိယ ပိုင်နက်ထဲက ဖြတ်သန်းသွားမှာသာ ရပါမယ် ။
ကုန်လမ်းနဲ့ လေကြောင်းကနေဆိုရင် အိန္ဒိယ စစ်တပ်သိရှိနိုင်တာကြောင့် ရေလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် အိန္ဒိယစစ်တပ်ကသိရှိသွားပြီး နှစ်နိုင်ငံ အဏ္ဏာဝါ စစ်ပွဲကို ဘယ်လိုအကြိတ်အနယ် နွှဲခဲ့ကြလည်းဆိုတာကိုတေ့ာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါလို့...
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Channel Burmese
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama, History
[FILE SIZE]:…………………….….:) 872 MB / 325 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 1280x536 / 640x268
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 56 mins
[Translate By]:……………………..:) Lin Thura
Posted by Y Junction at 7:16:00 AM3comments:
သိုင်းကားကြိုက်ကြတဲ့သူတွေကတော့ဒီကားထဲကမင်းသားနဲ့ သိပ်ပြီးစိမ်းလှမယ်မထင်ပါဘူး ဒီမင်းသားက "ငါးကလေး"သိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဟွားဝူချွဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့Nicholas Tseပဲဖြစ်ပါတယ်...
The Beast Stalker ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ စုံထောက်အက်ရှင်ကားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့မယ့်စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ...
ရဲအရာရှိ Tongဟာ အလုပ်အပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီး စည်းကမ်းကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ...
တစ်နေ့မှာတော့ တရားခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းစီးရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကိုသေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်မိသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်...
သူပစ်သတ်ခဲ့မိတဲ့ကလေးငယ်ကတော့ရှေ့နေဖြစ်တဲ့ Annရဲ့ သမီးငယ်နှစ်ဦးအနက်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲသူဟာ ရှေ့နေ Annရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သမီးငယ်လေးအနားမှာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကလေးငယ်ကိုဂရုစိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်...
အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့ Annရဲ့သမီးငယ်လေးဟာ သွေးအေးရက်စက်တဲ့လူသတ်သမားရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်...
ကလေးငယ်ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူAnnနဲ့ ရဲအရာရှိ Tongတို့ဟာ အရူးမီးဝိုင်းခံစားကြရပါတော့တယ်...
အဲ့ဒီကလေးမလေး ပြန်ပေးဆွဲသမားလက်က လွတ်အောင်ဘယ်လိုပြန်ကယ်တင်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ www.flim2mm.comဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ...
အညွှန်းရေးသူကတော့ နေပြည်တော် လယ်ဝေးသားလေး ကျော်မျိုးသူ ပဲဖြစ်ပါတယ်..
[FORMAT]:………………………….:) 720p BluRay / 360 SD
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 895 MB / 470 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 720x536 / 640x480
[Translate By]:……………………..:) ကျော်မျိုးသူ
[Encoded By]:...........................:) Nyi Htut (အလွမ်းသံစဉ်)
Posted by Y Junction at 11:20:00 PM No comments:
​​ဟောင်​​ကောင်​ပြည်​တွင်းမှ​ ဒေါ်လာသန်းတစ်​​ထောင်​​ကျော်​ တန်​ဖိုးရှိသည့်​ စိန်​​ထည်ပစ္စည်း​များကိုခိုးယူကာ ဂျပန်​နိုင်​ငံသို့ ထွက်​​ပြေးတိမ်းသွားသည့်​ လူဆိုးအဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးရန်​ တရုတ်​အစိုးရမှ မာဆယ်​ Jackie Chanနှင့်​ ရစ်​ကီ Yuen Biao ဆိုသည့်​အထူး​အေဂျင့်​စပိုင်​နှစ်​​ယောက်​ကို​စေလွှတ်​ခဲ့ရာ လူဆိုးအဖွဲ့မှ နာမည်​ကြီးဂျပန်​နင်​ဂျာဂိုဏ်း၏အကူအညီဖြင့်​​ အေဂျင့်​နှစ်​ယာက်​အားပြန်​လည်​တိုက်​ခိုက်​ပြီး ​အေဂျင့်​ရစ်​ကီကိုပြန်​​ပေးဆွဲသွား​ခဲ့သည်​ ​အေဂျင့်​မာဆယ်​သည်​ ရစ်​ကီကို ပြန်​လည်​ကယ်​တင်​ရန်​အတွက်​ ရဲစုံ​ထောက်​များကိုအသုံးမပြုပဲ သူ၏မိဘမဲ့​ကျောင်းမှငယ်​သူငယ်​ချင်းများဖြစ်​ကြ​သော က​လေးထိန်း(​ထောင်​ထွက်​) ကြံအ​ရေခွံ(ဓားပြ) ဆန်​ဒီ(တယ်​လီပသီရူး) ဂျင်​ဆင်း(သူခိုး) ​ခေါင်းဝိုင်း(ကျပ်​မပြည့်​သူ) စတဲ့သူငယ်​ချင်းငါး​ယောက်​၏ အကူအညီဖြင့်​ လူဆိုးအဖွဲ့အားဖမ်းဆီးကာ ဂျပန်​နင်​ဂျာဂိုဏ်းနှင့်​တိုက်​ခိုက်​ပုံများကို ဟာသအက်​ရှင်​ဆန်​ဆန်​နဲ့ ရှု့စားရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ ဒီဇတ်​ကားမှာ ဒါရိုက်​တာဖြစ်​တဲ့ဖက်​တီးမင်းသား Sammo Hung ကိုယ်​တိုင်​ Main Roleအဖြစ် ဂျက်​ကီချန်းနှင့်​ တွဲဖက်​ညီစွာသရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့အတွက်​ အရမ်းရီရတဲ့ ဟာသအက်​ရှင်​ဇတ်​မြူးကားတစ်​ကားပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Rockie Chan
Rockie Chan က ဘာသာပြန်ပေးထားပြီး Nyi Htut (အလွမ်းသံစဉ်) က blueray quality ရအောင် စေတနာပါပါနဲ့ ကုတ်ထားပေးပါတယ်။ ဇာတ်ကားကောင်း တလက်ကို ကြည်ကြည့်လင်လင် စာတန်းထိုးအမှန် ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါကြောင်း...
[GENRE]:……………………….… .:) Adventure, Comedy,
[FILE SIZE]:…………………….….:) 816 MB / 399 MB
[Translate By]:……………………..:) Rockie Chan
Posted by Y Junction at 8:08:00 AM2comments:
၂၀၀၈ လောက်ကထွက်တဲ့ရှရွန်ခမ်းရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ အလုပ်ကလွဲရင်ဘာမှမသိတဲ့အူတူတူကိုရေခဲတစ်ယောက် ကောလိပ်ဆရာ သမီးမင်္ဂလာဆောင်သွားရာမှမမျှော်လင့်ဘဲမင်္ဂလာသွားဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
သတို့သားနဲ့ သေကွဲကွဲခဲ့ရလို့အချစ်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေတဲ့သူကို မြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့မိလို့ အသည်းနင့်အောင်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။ အချစ်စစ်မှန် ရင်နောက်ဆုံးဖူးစာစုံမှာပဲလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ မင်းသမီး အချစ်ကိုရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားပုံကို ဟာသတစ်လှည့် ဒရာမာတစ်လှည့်ကြည့်ရမှာပါ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ကားဖြစ်လို့ငယ်တုန်းကခွေတောင်ပြန်မအပ်ခဲ့ပါဘူးဗျာ.. :D
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Drama, Romance
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1.2 GB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 47 mins
[Translate By]:……………………..:) Kyaw Kyaw (Myanmar Subtitles Foundations)
Posted by Y Junction at 12:11:00 AM No comments: